नेपाल आʼइडल टप ८ बाट झापाकि रचना रिमाल रुँʼदै बाहिʼरिन , बुबाले गरे सबैको मन छुने यस्ता कुरा (भिʼडियो सहित) - Nepal Insider
February 28, 2020 378
नेपाल आइडल टप ८ बाट झापाकि रचना रिमाल रुँदै बाहिरिन , बुबाले गरे सबैको मन छुने यस्ता कुरा (भिडियो सहित)
झापा , दमक। रचना रिमाल अर्थात चटपटेवाली यो नाम नेपाल आइडल सिजन थ्रीमा रुचाइएको, चलेको र निकै आशालाग्दो नाम हो । झापा भद्रपुर घर भएकी रचना नेपाल आइडलमा जानुभन्दा पहिला नै चर्चामा थिइन । नेपाल आइडलमा पुगेपछि रचनाको झनै चर्चा चुलिएको छ ।
सामान्य परिवारमा जन्मिएकी रचना रिमालको स्वर सानैदेखि नै आशा बोकेको थियो । बोली फुट्दादेखी गित गाउन रुचाउने रचनाले घर गाउँमा निकै राम्रो गाउने गरेको देखेर सबैले पाँच दश रुपैयाँ दिदै गित गाउन लगाउदै गर्थे । निकै मीठो उनको स्वरले स्कुल देखि पुराण लगायत जुनसुकै सानो कार्यक्रममा पनि स्थान पाउन थाल्यो ।
धेरै भजन समेत गाउदै किर्तनमा समेत पुरस्कार जितेकी रचनाले अब नेपाल आइडलको पुरस्कार पाउने कुरामा धेरैले सम्भावना बोकेकी कलाकार भनेर भनेका छन ।
नेपाल आइडलमा पनि निकै राम्रो प्रस्तुति संगै हरेक हप्ता जजहरुको पनि निकै तारिफ पाउदैछिन झापाकी रचना रिमालले । सारै मीठो स्वरकी धनी रचना नेपाल आइडल सिजन तिनबाट नेपालको पहिलो महिला बिजेता बन्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । नेपाल आइडलको कार्यक्रममा पनि सबैभन्दा धेरै राम्रो कमेन्ट रचनाकै आउने गर्दछ ।
रचनाको परिवारमा तिनजना छोरी अनि आमाबुबा रहेछन । रचना रिमाल तिनजना छोरीमा माइली छोरी रहेको हजुरबुबाले बताए। रचनाकी कान्छी बहिनी पनि निकै मीठो गित गाउने रहिछन । रचनाका बुबाले सफारी चलाउने काम गर्दा रहेछन ।
रचनाको बुबाले रचनाको बाल्यकाल सम्झिदा भाबुक भएर आफ्नी छोरिको बारेमा यस्ता गोप्य कुराहरु बताएका छन् ।
Prevमंगलबारसम्म प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा
Nextसरकारले भन्यो : ‘कर वृद्धिले उपभोक्ता मूल्यमा प्रभाव पार्दैन’
पशुपतिको फोहर सफाइ शुरु
कोरोना भाइरसको खोपमा सफलता मिलेको चीनको दावी
शिक्षकको अश्लिल हर्कत सहन नसकेपछि १९ छात्राले लेखे ‘प्रिन्सिपल’लाई पत्र
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (42821)
काेराेनाका कारण पहिलाे पटक एक नेपालीकाे ज्यान गयाे (39063)
Coronavirus लाई सामान्य नठानौँ : १०२ बर्ष अगाडी १० करोड मानिसको मृत्युको तथ्य र दृष्य [भिडियोसहित] (17003)
यस्ता ब्यक्तिलाई मात्रै लाग्दछ कोरोना भाइरस ! जानी राखौं (14459)
‘नेपालमा फेरी ८ रेक्टर भन्दा ठूलो भूकम्प जाने सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह’ – अध्ययन प्रतिवेदन (14419)
अस्ट्रेलिया काण्ड: के भएको रहेछ खास ? युवती आइन् लाइभमा (भिडियो) (13443)
रविले डाक्टर रुनालाई सोधे के नेपालमा कोʼरोना नआʼएकै होकी सरकारले सुचना लुʼकायो ? हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (12149)
लकडाउनमा दूध किन्न निस्केका युवाको प्रहरीको लाठीचार्जबाट मृत्यु, परिवारमा रुवाबासि (11461)
नेपालमा त कोरोना भाइरस आएकै छैन भन्नेहरूले एक चोटी अवश्य पढी सचेतनाका लागी सक्दो सेयर गर्नुहोला ! (10526)
नेपालमा कोरोना संक्रमितकहरुको संख्या धमाधम बढ्न थाल्यो (10491)
प्रधानमन्त्रीले मंगलवार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै, केही नयाँ घोषणा हुन सक्ने
धार्चुलामा अलपत्र नेपाली भन्छन् : एउटा काेठामा ४० जना बसेकाे छाैं, कुहिएरै मर्छाैं हाेला
राहत बाड्ने तरिका गुल्मीबाट सिक्ने कि ?
को’रोना संक्रमित बेलायती प्रधानमन्त्री बोरीस जोनसनलाई अक्सिजन दिन थालियो
कम्पनीले बस्नखान नदिएपछी सोलुखुम्बुबाट हिंडेरै काठमाण्डौं आए यी मजदुर (भिडियो)